I-Apple yandisa 'wonke umntu unakho ikhowudi' kwilinge langaphandle e-United States | Ndisuka mac
Ngokuchanekileyo kunyaka ophelileyo, uApple watyhila elinye lawona manyathelo akhe abalulekileyo. Kwaye ayinanto yakwenza nokwazisa iimveliso ezintsha ngephulo lentengiso elikhohlakeleyo. Hayi inyathelo lokubonelela ngamathuba abafundi ukuba bafunde ikhowudi yenkqubo yonyaka omnye. Ewe usebenzisa ulwimi lwakho, iSwift.
Ekuqaleni kwalo nyaka ka-2017, ezinye izikolo neeyunivesithi kulo lonke elaseMelika zamkela eli nyathelo zaza zafundisa ikharityhulam «iKharityhulam eSwiti» ukuphuhlisa usetyenziso lwe-iOS kunye neMacOS. Ikhosi yonke yenzelwe ngokupheleleyo ngootitshala be-Apple kunye neenjineli. Ukuza kuthi ga ngoku, ngaphezulu kwamaziko angama-30 egxile kwesi sicwangciso sifundo. Kodwa uApple wayefuna ukuya kwelinye inyathelo kwaye ufuna ukwandisa le kharityhulamu ngaphandle kwemida yaseMelika.
Kwelinye icala, i-Australia kunye nayo IYunivesithi yaseRMIT yaseMelbourne iya kuba nguye ojongene nokwamkela inyathelo kwaye wenze isindululo ngezifundo ezahlukeneyo zonyaka omnye zokuba abafundi bafunde ikhowudi kunye nokusetyenziswa kwezicelo. Khumbula ukuba uTim Cook ngokwakhe uphawule ukuba ikamva liya kubandakanya umsebenzisi ukuba azi ukuba enze njani izicelo zabo kwaye ke ahlangabezane neemfuno zabo.
Njengoko iziko lase-Australia ngokwalo liphawulile, ukongeza kokubandakanya ikharityhulamu ye-Swift Curriculum, Kuya kuphakamisa nezifundo zootitshala kunye nezifundo zasehlotyeni. Okwangoku, ikhosi yabafundi iya kufumaneka emntwini nakwikhampasi ekwi-Intanethi, into esele zinikezelwe ziiyunivesithi ezininzi kwihlabathi liphela.
Okokugqibela, ukuba sijonga ikharityhulamu, sinokubona ukuba iApple yayicinga ngayo yonke into kwaye ihambelana nobudala obahlukeneyo bomzimba womfundi. Koko kukuthi, kukho iikhosi zamabanga aphantsi, amabanga aphezulu kunye nemfundo ephakamileyo. Ngokunjalo, iincwadi ezahlukeneyo zasimahla zekhompyuter zaziswa ngokusetyenziswa kweeVenkile zeVenkile ukuqala inkqubo ngeSwift.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple yandisa 'wonke umntu unakho ikhowudi' kwilinge langaphandle e-United States